Things Kuti Muzive Kana Driving In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Things Kuti Muzive Kana Driving In Europe
With mazana zvinokwezva enhoroondo uye maonero makuru kuti siyana zuva akatsvoda coastlines kuti cavernous makomo, Europe Zvechokwadi ane zvose. It ndekwaunogumira wakakwana kuti mugwagwa rwendo, sezvo zvichibvira kuti nzira yako kubva imwe nyika kune imwe panyaya maawa. Uyewo mumwe zvikuru nzvimbo munyika kufamba. Pasinei nhau kuti munguva ichangopfuura EU akakundikana kuderedza ngozi dzokutyaira mumatunhu, avhareji rufu mwero ichiri yakadereresa riri ambova (1 mu 49 miriyoni).
Zvinokosha kucherechedza kuti pane zvimwe policies uye kurambidza panzvimbo maererano motokari Rental uye kuti mumwe nyika ine yakatarwa rayo remitemo nemamwe. Chii zviri zvakakwana zvinogamuchirika imwe nyika (kutyaira pasina sipidhi inodiwa pamusoro Autobahn muGermany, semuyenzaniso) Varege mune imwe, saka zvinobatsira kunzwisisa mitemo enzira sezvo iwe kuti nzira yako kubudikidza kondinendi.
Tichifunga izvi, isu makagadzira mazano batsira kuti urambe wakachengeteka uye mukati pakupedzisira mutemo panguva inotevera European mugwagwa rwendo:
1) Inishuwarenzi Vehicle Your
Zvinokosha kuti iwe une inishuwarenzi nokuparadzwa pakavha achityaira mu Europe. Kana vari motokari yako, unofanira kutaura kwenyu kambani inishuwarenzi kuronga izvi. Inishuwarenzi Kazhinji akakiya kuti chibvumirano paunenge vanoripira motokari, izvo zvinoita zvinhu zvishoma nyore.
2) Uyai Spare Glasses And Contact Lenses
Maiziva here kuti kana unofanira kupfeka mushonga lenses achityaira mumwe mubayiro motokari kuburikidza Spain, uri kunodiwa kutakura kechipiri peya nemi nguva dzose? Dzimwe nyika dziri zvishoma kuomesa pamusoro ichi, asi zviri tsika yakanaka kutakura kechipiri peya ziso kusakara nemi nguva dzose, kuitira unoziva ngozi zvose murwendo rwako vanofanira chikuru ziso kusakara yemasikati rako kana kuva yakarasika.
3) Zviripachena Dzivisa Kunwa And Driving
Nepo izvi zvingaita segore pachena mashoko, murege kuziva kuti dzimwe nyika vane razero shiviriro muganhu kuti vatyairi drink. Izvi zvinoreva kuti vatyairi havabvumirwi kuva doro muropa ravo zvose. The European Commission inopa zano pamusoro mureza ropa doro muganhu nerimwe nyika. In Cyprus, zviri kunyange pamusoro chemurairo kunwa chinwiwa achityaira. Izvi zvingaita kuomesa, asi zvakakosha kuremekedza mitemo nyika iwe kushanyira kudzivisa chero zvisingatarisirwi fines.
4) Kutyaira To The Right Or Left
Kunze United Kingdom, Ayarendi, uye Marita, Nyika dzose European kutyaira kurudyi parutivi pomugwagwa. For UK vagari, izvi zvinogona kuita anofambisa zvakafanana kunyengetedzana yokupoterera ari pakaunda Kutenderera mirayiridzo zvikuru runonyengera, saka zvinokosha kutora nguva kuchinja. Vatyairi vanofanira nguva dzose kuramba kurudyi uye kudzivisa kugara pakati Lanes ose mikuru avanosangana nawo. kana pezvinenge, nguva dzose yeuka kuti aone yenyu shure maonero girazi zvakare.
5) Bhuracha Up On Your Road Signs
Kunzwisisa European mugwagwa zviratidzo kuchakubatsira usvike kwauri kuenda zvakanaka uye achakubatsira kudzivisa nokudziurira mutemo. Most European dzakasiyana kushandisa mwero signage riri kurebesa kuzvidzora tsananguro, asi kuduku kusiyana Fonts kana ruvara vanowanza kuvhiringidza. Vasati vatanga rwendo, you might want to familiarize yourself with the misiyano dzisinganyatsooneki mu mugwagwa signage Europe yose. Pamwero muduku zvikuru, zvinogona kubatsira kudzivirira kuvhiringidzika, uye dzakawanda, zvinogona kuponesa upenyu hwako.
6) Nzwisisa sei Toll Collections Work
Nyika dzinosiyana siyana kwaunenge rates nzira mutero muunganidzwa. In France, semuyenzaniso, zvichiri zvinogamuchirika kubhadhara pamwe mari pamagedhi mutero. Other nharaunda zvinoda iwe kuratidza munhu chinamirwa pamusoro motokari yako kusimbisa kuti iwe unobhadharwa kushandisa zvimwe migwagwa. Familiarizing pachako sei tolls vanoshanda neimwe zvauri kuda dzokugara kuchakubatsira kudzivisa chero Zvirango.
7) Tora The Train Panzvimbo Of Driving
Zvakanaka kana uchida kunakidzwa rwendo wako, musiye dzichikunetsa kuti kutyaira, uye ingotora chitima Europe, munhu wose ari ino kushandisa chitima, uye kusafanana nedzimwe nzvimbo munyika, zviri nyore kwazvo kuti kutenga chitima matikiti paIndaneti chete nzvimbo dzakaita Save A Train, uye imi makakohwa kufamba uye kuona hunhu pasina kunetseka rakawandisa.
Ready kunakidzwa Europe? kuakunda ukasarudza uchityaira kana kutora chitima, isu chokuyeuka Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “Things kuziva kana kutyaira mu Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/things-to-know-when-driving-in-europe/ ‎– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#kutyaira njanji nezvitima Train Travel
I work as a part time tour guide in Kent and blogs about the experience. Her favorite weekend activity is a walking tour in South West Coast of Bristol. She is also a strong advocate of sustainable lifestyle, and hopes to write a book about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - Unogona baya pano ndibate